Hordhac dhamaystiran 25 8tracks Apps
Dhageysiga music waa qayb ka mid ah dad badan oo noloshiisa. Music saameeyaa niyadda si weyn oo kaliya ka dhigaysa wax walba oo uu dareensan yahay in si fiican. Oo haddii aad tahay mid ka mid ah dad badan oo Waali dhegaysanaya music oo doonaya in ay dhagaystaan ​​in ay isku dayaan in aad dhegaysato nooc kale oo kasta oo muusiko ah, markaas waa in aad u leexdo xagga 8tracks. Website-kani wuxuu ka kooban yahay playlists sameeyo dadka isticmaala ay. Tani waa hab fiican oo in la ogaado music cusub ee qaybaha kala duwan. Iyo in aad waayo-aragnimo music sahlan oo si fudud, 8tracks ayaa soo saaray Chine ee nooc oo kala duwan in ay noqon doonto la jaan qaada qalabka kala duwan, nidaamyada hawlgalka, iyo website-yada.
Qeybta 1: Mobile Apps
Qeybta 2: Desktop Apps
Qeybta 3: Windows Apps
Qeybta 4: plugins
Haddii aad tahay qof ku mashquulsan oo mar walba ku go, waxaad ka faaiidaysan karaan barnaamijyadooda kuwaas oo loogu talogalay qalabka aad mobile si aad u dhegaysato music si, oo dhan lacag la'aan ah!
Haddii aad tahay taageere Apple ah, waxaa jira gabi ahaanba app ah 8track aad u. Waxaad ku soo bixi kartaa lacag la'aan ah ama sare loogu version ad-xor ah oo $19.99. Waxaad ka ciyaari kara kuwan raadkaygay dhawaaqa hadda halka waxbarasho, nasto, ama si fudud u gaadhi kula cajiibka ah app. Waxaa sidoo kale YouTube iyo Soundcloud dhafan taas oo macnaheedu yahay waxaad u baahan doontaa xulashada ballaaran oo muusiko ah.
Wixii taageerayaasha Android Dhanka kale, 8tracks app ayaa sidoo kale diyaar u ah Android dadka isticmaala telefoonka. Haddii aadan haysan hakin baxay ka shaqeeya si ay u doortaan songs on maktabadda music aad sida 8tracks waxaa kuu sameyn karo. Waxay ku dooratay muusigu in ay la mid tahay dhadhan si waxaa laga yaabaa in habka ugu fudud ee aad u dhegaysato music wanaagsan wax kasta oo aad samaynayso.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa 8tracks ah oo bilaash ah haddii aad tahay user a Blackberry. Iyadoo in ka badan 700,000 oo playlists abuuray by users kala duwan, waxaad maqli karo in kasta oo heeso nooca aad rabto. Hadda waxaad ku raaxaysan karaan song kasta oo aad rabto in aad isku daydo, oo maqla oo aan sameeyo dadaal badan iyo in ay sugaan sida app tani waa si dhakhso ah oo sahlan loo isticmaali.
Dadka isticmaala telefoonka Windows sidoo kale kala soo bixi kartaa app 8tracks ay qalab. Marka laga soo tago dhagaysto playlists abuuray dadka kale, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa adiga kuu gaar ah oo aad la wadaagto music aad jeceshahay in ay dadka ku nool qayb kala duwan ee dunida.
Ahaa Radio waa app ah la heli karo qalabka telefoonka macruufka iyo Android. App Tani kala 8tracks aad jeceshahay laysku daraa galay idaacadaha modified, taas oo kuu sahlaysa, ammaana u ah in aad si ay u helaan music aad jeceshahay mar kasta oo aad rabto in aad muusiko dhegayso.
Marka aad soo bixi app Sonos, waxa aad awoodi kartaa in ay si fudud u heli 8tracks iyo dhagaysan keegag aad jeceshahay ama playlists toos ah uga jiraan. Hadda waxaa ka hawl yar in aad ogaado music cusub oo ay ku riyaaqaan halka aad gaadhiga wado, waxbarasho, ama uun soo laallaada ee xeebta! App Tani waa la heli karo qalabka macruufka, Android, iyo Windows.
Haddii aadan rabin inaad kala soo baxdo barnaamijyadooda kasta, waxaad weli heli kartaa 8tracks ay iminka ku soo biraawsarkaaga mobile. Waxay leeyihiin version mobile taas oo ka dhigaysa in ay u fududahay in aad dhagaysan playlist oo wuxuu ku raaxaysan music, taas oo ay taageertaa labada kumbiyuutarada casriga ah iyo kiniin.
Apptui waa app hal xakamayn kartaa website-yada warbaahinta kala duwan sida YouTube, Pandora, Netflix, vimeo, iyo kuwo kale, oo dabcan ay ka mid yihiin 8tracks. Tani app smart waxaa loo isticmaali karaa sida rimuut koontaroolka kaas oo aad computer marka aad u ciyaareyso warbaahinta la your computer. Iyada oo ay taasi waxa aad awoodi kartaa in ay joojiyaan, ciyaaro, iyo dooran playlist aad rabto in aad ka ciyaaro your computer isticmaalaya telefoonka gacanta.
Tani app macruufka ku salaysan kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho faahfaahin ku saabsan barnaamijyada TV, filimada, heesaha, iyo sidoo kale ku siiyaan liiska liiska 8tracks waa u muuqataa si isku mid ah hees aad rabto in aad maqashaan. Tani waa qumman yahay ee ku caashaqay kasta music halkaas.
Tani waa app fudud laakiin smart in soo jeedinaya music ku xiran xaaladda cimilada ama wax kasta oo hawada aad dooneyso inaad aad. Waxaad dooran kartaa ma song aad rabto inuu u ciyaaro, app doorto heeso aad u ka 8tracks. War sow ma aha la yaab leh? WeatherJams waa la heli karo qalabka macruufka iyo Android.
Mixtapes waa app phone Windows uu soo saaray Sofitel. App Tani easly oo siman in ay boqolaal kun oo keegag ku qoran 8tracks helaan ku siinayaa. App Tani waa qalab la yaab leh in ay dhagaystaan ​​noocyada ugu fiican ee aan music adduunka leeyahay in ay bixiyaan.
App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku raaxaysato oo ogaan music si fudud oo bilaash ah. Tani waa app kale oo aad kala soo bixi kartaa telefoonka Windows shaqeeya by 8tracks. Halkan waxaad si fudud u heli karaan music maanta cusub oo kulul. Tani waxay la yaab leh app leeyihiin feature play asalka iyo helitaanka guriga fudud oo aad waayo-aragnimo safar dhawaaqa hab fudud oo ku habboon ka dhigaysa.
WebOS App loo abuuray by Gabe Testa. Ujeeddada ugu weyn waa in aynu dadka isticmaala in ay ku xidhmaan 8tracks sahlan meel kasta oo ay yihiin. In kastoo app this kuma jiraan Upload weli qoreysa, ay horeba uga shaqaynayay waxay ku. Sidaas darteed waa inaad posted!
Tani waa app radio ah oo loo dhisay in 8tracks API. Halkan waxa aad ka raadin kartaa wax song ha toos ah u ciyaaro marka aad ka soo fikrado ah waxa in ay dhagaystaan. Waxaad si fudud u sii qulquli karaan music mid ka mid ah nooc kasta, ka hip-hop, pop, Oo dhagax weyn, wax walba oo aad rabto in aad si bilaash ah.
Haddii aad online ama sida waxbarasho ee hore ee kombiyuutarka, ka shaqeeya dhagaysiga muusigga waxaa laga yaabaa in qayb weyn oo aad maalin maadaama ay kaa caawinaysaa in aad sii daayo xiisadda iyo walaaca. Iyo in aad waayo-aragnimo music nasashada fududeeyo, waxa halkan ku sugan yihiin qaar ka mid ah barnaamijyadooda desktop waxaad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah.
Haddii aad qabto Windows 8 rakibay si aad PC, ka dibna soo degsado app 8tracks waa wax lagama maarmaan ah in la sameeyo. Marka laga reebo xaqiiqada ah in aad si fudud u dhegeysan kartaa music aad jeceshahay si fudud, waxa kale oo aad gali kartaa adiga oo soundtrack jecel u gaar ah si ay ula wadaagaan dunida.
Baro maanta cusub oo kulul songs la Sonos. Hel Sonos on your computer iyo dhagaysan nooc kasta oo music aad ku faraxsan tahay in ay dhagaystaan ​​ku qoran 8tracks. Tani waa hab ku haboon inay ku raaxaystaan ​​iyo nasato la music meel kasta oo aad tahay tani ma aha oo kaliya diyaar u ah PC; Tani waxay sidoo kale waxaa lagala soo bixi karaa in qalabka sida mobile casriga ah iyo Tablet kumbiyuutarada.
Sida magacaba ka muuqata, app Tani waxay kuu ogolaanaysaa isticmaala Apple Mac in ay geliyaan oo dhan music ay si fudud u doonayaan inay 8tracks. Laakiin dabcan, taasi ma ogola oo keliya in aad music geliyaan, arrintan waxa kale oo aad ku dhegeysan kartaa miyuusigga oo dhan aad rabto in aad ilaa iyo inta aad rabto.
Tani app horyalka Talyaaniga ee kombiyuutarada Mac joogo in bar menu aad taasoo u fududaynaysa in aad heli 8tracks la qasabno oo kaliya dhowr aad mouse. waa la safeeyey, si dhakhso ah, oo lagu kalsoonaan karo, sidaa darteed heerka ku xiga qaadato safar codka la 8tracks Radio u Mac!
Waxa intaa dheer in 8tracks ee Windows 8 Apps, 8tracks for Windows phone, Mixtapes, iyo Beats Flat in horay kor ku xusan, waxaa jira app kale aad heli karto Windows-ku-saleysan.
Iyadoo 8tracks loogu Madaxweyne Siilaanyo, aad haatan ka ciyaari kara halka dhagaysiga muusigga fudud! App wuxuu kuu ogolaanayaa inaad in ay helaan aan xad lahayn si ay malaayiin keegag uploaded in 8tracks aad Console Madaxweyne Siilaanyo. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa adiga kuu gaar profile toos ah uga soo app this.
Haddii aad leedahay website a ujeeddooyin shakhsi ama ganacsi, oo aad rabto in aad saaray music it on. Waxaad waa in ay tixgeliyaan rakibidda 8tracks plugin waxa ku jira.
Waxaad Cudarada karaa music playlist website-aad WordPress ku salaysan la 8tracks plugin for WordPress. Hadda, ma waxaad tahay mid ka mid ah oo keliya, kuwaas oo ku raaxaysan karaan music qurux badan, laakiin sidoo kale soo booqda ama raaca. Tani waa fiican ee blogsites, iyadoo music aad samayn kartaa oo soo booqda aad marar badan iyo waqti dheer sii joogo.
Waxaad hadda ku xidhi kartaa goobta Joomla la 8tracks inuu u ciyaaro ugu dambeeyay iyo heesaha ugu caansan ee maanta. Tani waa mid aad loo soo dajiyo iyo aad u dhigi karto radio aad gundhig in qayb ka mid ah website. Adiga iyo dadka soo booqda webka sidoo kale ka qaadan kartaa oo music ay doonayaan inay ku ciyaaraan oo maqla.
> Resource > Apps > A Hordhac Buuxi 25 8tracks Apps